> Resource > Free > Top 5 Best Free Divx Video jaraya
Video goynta waa shey muhiim ah oo ah video edition. Warka fiicani waxa weeye in ay jiraan tiro ka mid ah codsiyada oo lacag la'aan ah oo aad u isticmaali karto hawsha. Halkan waxaa ku qoran liiska ugu sareeya 5 Free Divx video jaraya aad u.
Cute Video magaabay
Avidemux waa video goynta lacag la'aan ah iyo software ku biiro. Waxa ay taageertaa qaabab sida 3GP, Ogg Vorbis, DivX, Xvid, VP3, Huffyuv, WMV2, H263, MSMP4V2, SVQ3, mid ceedhin ah iyo in ka badan. Waxaa fudud in la isticmaalo. Si aad u gooyay file video ah, oo kaliya calaamadee upka iyo soo afjaridda dhibcood. Markaas software this fudud u jari karo files ee googooyo.
Software Arintan waxay u sahlaysaa in aad ka gooyay qayb ka mid ah video ah oo sii socon oo u badbaadin doonaa in la mid ah ama qaab ka duwan. Waxay bixisaa daaqad weyn ee si aad u aragto fursadaha kuu diyaar ah iyo files video for. Waxaad isticmaali kartaa qaabab kala duwan sida MPEG4, wmv, DivX, MOV, MP3, FLV, Xvid, Quicktime MOV, AVI iyo Flash Video. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso si ay u dhinto video yahay waa ku shuban ka dibna dooro qaybaha aad rabto in aad la gooyaa oo sii wadi inaad doorato qaabka aad wax soo saarka.
Miisaanka yar oo ay fududahay in la isticmaalo;
Taageerada tiro balaadhan oo ah qaabab.
Ma qabsato karaa tayada video barnaamijka.
Video Edit Master waa free video magaabay aad u weyn si ay u dhinto oo ay ku biiraan videos si fudud oo degdeg ah oo la video tayada asalka ah. Interface waxaa si fiican u habaysan si aad awoodo habayn si fudud ganaax faylasha sida loogu baahdo. Si kastaba ha ahaatee, waxa keliya oo ay taageertaa AVI (Divx, Xvid..etc.) Iyo MPEG video files.
Interface si sahlan loo isticmaalo An.
Waxaa mararka qaarkood bidbidayaan;
Taageeraan Kaliya AVI iyo MPEG video files.
Kani waa barnaamij oo kaa caawin kara inaad ka video ah soo saarto qaybaha aan la rabin. Iyadoo slider ah, waxaad si fudud u dooran kartaa qaybo ka mid ah si ay u dhinto. Taageerada qaabab sida MPEG-1/2, wmv, AVI, FLV, MP4, DVD / VCD / SVCD, iPhone, AVI, Divx, Xvid, Apple TV, MOV iyo si ka sii dhab badan.
Looma baahna in la raadiyo ah rakibi codec kasta oo kale;
User interface Easy.
No tilmaamo audio.
VSDC Free Video Editor taageertaa noocyada kala duwan ee videos sida MKV, FLV, Mpg, MP4, wmv, VOB, DAT, AVI, DIVX ,, MOV, iwm .. waxaa Iyadoo, goynta iyo videos MKV qaybsama noqon kartaa fudud.
Haddii aad u baahan tahay xirfad dheeraad ah Divx video magaabay ah, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) si weyn lagu talinayaa. Ayaa shaqada goynta video awood badan kuu ogolaanaya in aad si fudud u jaray video files yeela Goosimo kala duwan. Waxaad kaloo isticmaali kartaa goobta shaqada la ogaado dhisay-in si ay u dhinto video ka sii hufan.